Farmaajo : Inta badan Muqdisho waxaa gacanta ku haya DKMG, Mana Jiraan Ciidamo Itoobiyaan ah oo Dagaalka ku Jira | raascasayrmedia.com
← Madaxweyne Shariif oo Barlamanka ku celiyay go’aankoodii kana Hadlay Dagaalada ka socda Gobolada Dalka
Degmada Baargaal oo ay FAO Mashruuc ka Fulisay →
Farmaajo : Inta badan Muqdisho waxaa gacanta ku haya DKMG, Mana Jiraan Ciidamo Itoobiyaan ah oo Dagaalka ku Jira
Ra’iisul wasaaraha dowladda KMG Soomaaliya Max’ed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in ciidamada dowladda KMG iyo kuwa AMISOM ay kala wareegeen Xarakada AL Shabaab inta badan Magaalada Muqdisho.
Max’ed Cabdullaahi Max’ed Farmaajo Ra’’iisul wasaaraha dowladda KMG Soomaaliya oo maanat wareysi gaar ah siiyay warbaahinta Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay in saakay ciidamada dowladda KMG ay weerar ku qaadeen fariisimo xarakada Al Shabaab ay ku lahaayeen Magaalada Muqdisho.
Waxaa uu sheegay Farmaajo in dagaalkii saakay ka dhacay Magaalada Muqdisho ay guul ka soo hooyeen ciidamada dowladda KMG Soomaaliya, isagoo intaasi ku daray in askartii Shabaab ee dagaalka ka qeyb qaadaneysay ay carar ku gaareen degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe sida uu hadalka u dhigay.
“Waxa uu dagaalkaani bilowday saakay aroor hore waxaana uu ka dhacay aaga warshada caanaha iyo dhanka wasaarad Gaashaandhiga, waxaa is kaashanayay ciidanka qaranka iyo kuwa AMISOM halkaasi waxaa ka dhacay dagaal qaraar balse cadowga waxaa ku dhacay dharbaaco xulul cararkoodiina waxaa laga sheegayay Balcad, hadana ay qafaalanayaan ilmo yaryar oo dagaalka ay galinayaan” ayuu yiri Farmaajo.
Max’ed C/laahi Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dowladda KMG aysan ka laaban doonin fariisimihii maanta ay kala wareegeen xarakada Shabaabul Mujaahidiin islamarkaana dagaalku uu sii socon doono.
“Waa howlgal socday boqol maalina kuma eka maalin walba waxaan qaadeynaa howlgal culus waan wadeynaa in ilaa aan dalka ka saareyno Shabaab” ayuu hadalkiisa intaasi sii raaciyay farmaajo.
Mar Ra’iisul wasaaraha dowladda KMG oo Saxaafadu ay weydiisay in dagaalada ay ka wadaan gobolada dalka ay qeyb ka yihiin ciidamo Ethiopian, ayaa Farmaajo waxaa uu sheegay in ciidamada dowladda oo kaliya ah yihiin ciidamada dagaalada iyo dhaq dhaqaaqyada ka wada gobolada dalka.
“ inagaa isku filan, ciidanka Soomaaliya maanta waa 17 kun oo askari ciidanka AMISOM-na waa 12 kun intaasi ayaa inagu filin majirto wax aan uga baahanahay Ethiopia, madooneyno in la qaldo shacabka oo la yiraahdo Ethiopian ayaa ku jira dagaalka” ayuu hadalkiisa ku soo gaba gabeeyay Ra’iisul wasaare Farmaajo.
Hadalka Ra’iisul wasaare Farmaajo ayaa imaanaya xili maanta sedax gobol oo kuyaala bartamaha iyo koofurta Soomaaliya ay si wadajir ah uga dhacayeen dagaalo culus oo u dhaxeeya Shabaab iyo ciidamad dowladda KMG Soomaaliya.